Baarlamaanka oo Sharcidaro ku tilmaamay Doorashadii Axmed Madoobe – STAR FM SOMALIA
Guddiga Arimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaanka Somalia, ayaa sharcidaro ku tilmaamay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.
Daahir Amiin Jeesoow Guddoomiye Ku xigeenka Guddigaasi, ayaa sheegay in wixii shalay ka dhacay Magaalada Kismaayo aysan aheyn doorasho, balse ay tahay wax Bulshada Jubbooyinka lagu qaldaayo.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, ayaa sheegay Wasaarada Arimaha Gudaha inay ka sugayaan go’aanka ku saabsan doorashadaasi, maadaama Xildhibaanada Jubbaland kol hore ay kala direen sharci ahaanshahooda Baarlamaanka Dhexe ee dalka.
“Baarlamaanka Jubbaland ee Axmed Madoobe doortay iyaga ayaan sharci aheyn maxay doortaan Madaxweyne,marka waxaan soo jeedin lahaa in aan la qaldin dadka Nabada iyo Hormarka iyo Dowladnimada Jecel ee Jubbooyinka ku nool.” Ayuu yiri Jeesow oo la hadlay Warbaahinta.
Siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda Gobolka Gedo ayaa Doorashadaasi ku tilmaamay mid sharcidaro ah oo aanan waafaqsaneyn Dastuurka dalka u yaallo, maadaama dadka Goboladaasi dega aysan u dhameyn doorashada.
Xarunta Caymiska ee Magaalada Kismaayo ayaa shalay lagu doortay Axmed Madoobe oo ay la baratamayeen Afar Musharax, Axmed Madoobe wuxuu helay 68 cod oo kaga guuleysto musharaxiinta kale.
Ilaa hada Doorashadaasi waxaa soo dhaweeyay IGAD, Iyo Madaxweynaha Maamulka Puntland oo xulafaysi siyaasadeed kala dhaxeeyo Maamulka Jubbaland.